Dharka caadiga ah ee Talyaanigu waxay bixiyaan dhiirigelin qurux badan | Wararka Safarka
ka dharka caadiga ah ee waddan kasta Waxaa lagu xushaa iyada oo lagu saleynayo hiddaha, taariikhda iyo xilliyada haybadda meel walba. Dharkaan ayaa qayb ka ah dhaqanka waddan kasta inkasta oo aan maanta la isticmaalin, haddana waxay astaan ​​u yihiin dhammaan dadka deggan dalka. Astaan ​​ay la soo baxaan munaasabadaha gaarka ah sida ciidaha muhiimka ah.
Talyaanigu waa waddan qurxoon runtiina waa weyn yahay, sidaa darteed waxaa laga yaabaa inay jiraan fasiraado kala duwan oo ku saabsan waxa dharka caadiga ah ee Talyaaniga. Caadooyinka iyo dharka ayaa isku beddela waqooyiga ilaa koonfurta sidaa darteed waxaan isku dayi doonnaa inaan wax yar ka tusino xirmadaan dharka ah oo umuuqda inay ku caan baxeen Talyaaniga.
1 Isticmaalka dharka caadiga ah
2 Dharka caadiga ah ee Talyaaniga
3 Renaissance ee Talyaaniga
4 Roman soo dhaafay
5 Dharka Sardinia
6 Cunnooyinka Venice
Isticmaalka dharka caadiga ah
Dharka caadiga ah waxaa lagu xasuustaa xusuus hore oo xilliyadii ay waddammadu noolaayeen xilli qurux badan. Suudhadhkani way kari karaan waxay leeyihiin nooc kasta oo saameyn ah runtiina dacwadaha Talyaanigu waxay la mid yihiin kuwa Jarmalka. Kuwani waa dharka badanaa lagu dhiirigeliyo qarniyadii dhexe ama waqtiyadii aysan jirin saameyn caalami ah oo ku saabsan moodada, sidaas darteed wax walbaa si aad ah ayey u saxsanaayeen. Sida loogu talagalay isticmaalka dharkaas, waxaa badanaa lagu soo saaraa xafladaha danaha gobol ama qaran. Daqiiqadaha oo gobol kastaa leeyahay dabaaldegyo lagu xusayo dhaqankiisa iyo dhaqamadiisa, markaa dharka ayaa aad muhiim u ah maadaama ay qayb ka tahay xafladda.
Dharka loo qaadan karo kan ugu caansan Talyaaniga wuxuu ka kooban yahay a goonno leh maqaar-gacmeed iyo dufan. Waa dhar ku dhegan oo leh jaakad iyo shaadh cad oo dusha sare yaal. Intaa waxaa dheer, madaxa ama xijaabka timaha ayaa aad ugu badan dabaaldegyada Talyaaniga, waa inaanan ilaawin muhiimadda Katooliga ee dalkan. Maanta waxaad arki kartaa dhar badan oo la mid ah kuwan, oo ay dhiirrigeliyeen xilliyadii dhexe, in kasta oo xagga dharka caadiga ah ay jiraan gobollo muujinaya dhar aad u kala duwan oo gaar ah.
Renaissance ee Talyaaniga
Mid ka mid ah waqtiyada ugu ixtiraamka badan Talyaanigu waa Renaissance, markii ay jirtay daqiiqad qurux badan. Intaa waxaa dheer, dharka iyo dharka xilligan waxay leeyihiin tayo aad u qurux badan oo faahfaahsan. Suudhadhka lagu dhiirrigeliyay waqtigan badanaa waa qaali, maxaa yeelay waxaan ka hadlaynaa xargaha iyo maraqyada si loo sameeyo dhar leh lakabyo iyo faahfaahin badan. Dharkaan waxaa badanaa loo isticmaalaa xafladaha loogu tala galay qarniyadii dhexe iyo in lagu soo celiyo xilliyadii hore. Waxaa sidoo kale loo adeegsadaa dabaaldega Carnival, gaar ahaan Venice.
Roman soo dhaafay
Qof kastaa wuu ogyahay waqtiyadii Roomaanka iyo quruxdiisa suudhadh lagu sameeyay maro cad. Iyagu waa dhar ay maanta ka mid yihiin dhaqan caan ah oo qof waliba u isticmaalay sida dharka caadiga ah ee Roomaanka, laakiin waa in aynaan iloobin inay iyaguna qayb ka yihiin dhaqanka iyo taariikhda Talyaaniga. Sidaa darteed waxaa loo tixgelin karaa inay yihiin dharka kale ee caadiga ah ee ay dhiirrigelisay Boqortooyada Roomaanka.
Jasiiradda Sardinia waxay ku leeyihiin faahfaahin dhaqameed oo kala duwan dharkana waxaan ku arki karnaa midkood. Suudhadhkan waxaa lagu sameeyaa dhar dhaadheer oo ballaadhan oo ay ku jiraan dhowr lakab. Koofiyadaha madaxa iyo xijaabka waxaa loo isticmaalaa madaxa iyadoo leh dhar qaro weyn iyo xarig, dhowr lakab sidoo kale. Waa caadi in la arko dahab daabac leh iyo hooska sida casaanka ama cagaarka. Iyaga, shaati-gacmeed cad oo gacmo-gashi ah oo ku labisan jaakad ayaa ku caan ah.
Gaar ahaan muhiimad ahaan marka la eego dharka caadiga ah waa Dabaaldega Venice, kuwaas oo caan ka ah adduunka oo dhan. Xaaladdan oo kale, waxaa lagu dhiirrigeliyaa dharka quruxda badan ee Renaissance halkaas oo ayan ku xoqin markay timaaddo muujinta dharka raaxada iyo faahfaahinta. Marabado, xariir iyo satin ayaa qayb ka ah suudhadhkan quruxda badan. Goonnada ayaa leh mug badan iyo xayawaan jilicsan. Dusha sare ayaa boodhadhku isku hagaajinayaan si ay u muujiyaan dhexda. Suudh ayaa lagu qurxin karaa nooc kasta oo faahfaahin ah, laga bilaabo xargaha ilaa baalal midab leh. Marka laga hadlayo Carnival, ma jiro dhar labis oo si adag loo raacayo, kaliya dhiirrigelinta Renaissance ee ku faaneysa wax walba. Dusha sare waxaa suurtagal ah in lagu arko xijaab ama koofiyado ballaaran. Laakiin haddii ay jiraan wax ay tahay in lala socdo dharkan, waa waji dabbaaldegyada Venetian, oo iyagu horay caan uga noqday adduunka oo dhan. Maaskaradaani had iyo jeer waxay u dhigmaan suudka midab ahaan waxaana badanaa lagu qurxiyaa brilliants, midab midab leh iyo faahfaahin kale oo xitaa raaxada ku daraya suudhka oo dhan. Iyada oo ay weheliso dharkaasi waxaad sidoo kale arki kartaa qaar ka mid ah qalabyada, sida taageerayaasha ay ka buuxaan kuul iyo baalal ama galoofisyo
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » General » Dharka caadiga ah ee Talyaaniga
Maxaa lagu arkaa Los Angeles
Cala Turqueta, geeska quruxda badan ee Menorca